Marka aad go'aansato inaad isticmaasho | Ota Ward Hall Aplico
Markaad isticmaaleyso hoolka weyn, hoolka yar, iyo qolka carwada
Ama markii aad adeegsanayso xarumaha madadaalada ee loo arko inay lagama maarmaan u yihiin maareynta xarunta ayaa ah, rajada laga qabo hal bil ka hor taariikhda isticmaalka guud ahaan waxaad keentaa dukumintiyada soo socda, fadlan u tag karraaniga iyo shirarka.
Barnaamijka ama jaantuska horumarka, buugyarahan, qorshaha amniga, tigidhka ogolaanshaha ama tigidh lambar leh (tusaale ahaan)
Waxaas kor ku xusan ka sokow, dhacdooyinka ka socda hoolka weyn waxaa ka mid ah sawir masraxeed, sawir laydh, iyo acoustic sawir.
Markaad isticmaaleyso istuudiyaha
Alaabta laguma iibin karo istudiyaha
Isticmaalka dabka, iwm. Qeybta Kahortaga Waaxda Dabka Kamata
2-28-1 Kamatahoncho, Ota-ku Telefoonka: 03-3735-0119
Amniga iwm Saldhiga Booliska ee Kamata
2-3-3 Kamatahoncho, Ota-ku Telefoonka: 03-3731-0110
Dhajinta xayeysiiska / ogeysiisyada
Fadlan nala soo socodsii haddii aad rabto inaad dhajiso boodh boodhadh ah.
Maalinta la isticmaalayo, fadlan soo bandhig foomka oggolaanshaha isticmaalka soo dhoweynta kahor intaadan qolka isticmaalin.
U diyaar garowga musiibada, fadlan qaado dhammaan tallaabooyinka suurtogalka ah sida hagidda daadguraynta ee booqdayaasha, xiriirka degdegga ah, gargaarka degdegga ah, iwm.
Waxaa ku yaal qolka carruurta dabaqa koowaad.Haddii aad rabto inaad isticmaasho, fadlan la socodsii shaqaalaha.Fadlan ku maaree dhinaca isticmaalaha.
Isticmaalka ka dib, fadlan ku soo celi qalabkii dhacdooyinka la isticmaalay xaaladdii asalka ahayd.Intaas waxaa sii dheer, fadlan hubso inaad la tagto alaabtaada shaqsiyeed isla markaana ha uga tagin xarunta.
Mabda 'ahaan, waxaa lagaa doonayaa inaad magdhaw ka bixiso burburka haddii qalabka ama qalabka ay waxyeelloobeen ama luntay.
Fadlan guriga la tag qashin kasta oo ka dhashay cunista iyo cabitaanka, iyo walxaha qashinka lagu soo saaro masraxa.Haddii ay dhib tahay in gurigiisa la geeyo, waxaan uga shaqeyn doonnaa lacag, sidaas darteed fadlan nala soo socodsii.
Fadlan isticmaal meesha baabuurta la dhigto ee dhulka hoostiisa caraf udgoonku ku shaqeeyo (xadka dhererka 2.1 m).
Qabanqaabiyaha waa lacag la'aan dhigashada maalinta, laakiin waxaa jira xaddidan tirada gawaarida iyadoo kuxiran xarunta.
Dhammaan baarkinka loogu talagalay dadka isticmaala guud ayaa laga qaadi doonaa lacag.
Musqulaha loogu talagalay marin-u-socodka badan ee curyaamiinta waxay ku yaalliin dabaqa 1-aad iyo 1-aad iyo hoolka weyn (dabaqa 1-aad).
Haddii aad ka soo gasho goobta baabuurta la dhigto ee dhulka hoostiisa, fadlan isticmaal wiishka.